Melancholia – Gold Channel Movies
Nov. 10, 2021 tvN
1Season 1 Nov. 10, 2021
Episode 1 Nov. 10, 2021
Episode4Nov. 18, 2021
Episode5Nov. 24, 2021
Episode6Nov. 25, 2021
Episode9Dec. 08, 2021
gc ပရိတ်သတ် တွေကြည့်ရှုရမယ့် ဒီတစ်ခေါက်ဇာတ်လမ်း လေးက တော့ သင်္ချာဆရာမနဲ့သင်္ချာထူးချွန် ကျောင်းသားကြားက ပေါ် ပေါက်လာတဲ့ ကြည့်နှုး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း လေးဖြစ်ပါတယ်။ Melancholia 멜랑꼴리아 လိုအမည် ပေးထားတဲ့ ဒီဒရမ်မာ လေးက တော့ ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသားကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်း လေးဖြစ်လို အသက်ကွာဟချက်ကြောင့် မမနဲ့ မောင်လေးအချစ်ခံစားချက်မျိး လေးကိုပါ တစ်မျိးတစ်မည်ခံစားရစေမှာပါ။
Privateအထက်တန်း ကျောင်းမှာ သင်္ချာဆရာမဖြစ်ပြီး သင်္ချာဘာသာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အပြင် ကျောင်းသား တွေကိုလည်း အမြဲတမ်းသင်္ချာ မေးခွန်း တွေအတွက် ကြိုးစားအ ဖြေရှာခိုင်းသူ Ji Yoon Soo
သူမဟာသ ဘော ကောင်းတဲ့အပြင် သူမစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဘယ်ဆန္ဒတွေကိုမဆို ဖြစ် မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူပါ။ အဲ့လိုအဘက်ဘက်ကပြည့်စုံတဲ့ဆရာမဟာ သူမရဲ့ကျောင်းသား Baek Seung Yooနဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်မိသွားတဲ့အခါ….
ငယ်ငယ်ကတည်းကသင်္ချာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ တွေမှာ ဆု တွေတန်းစီရဖူးပြီး နိုင်ငံခြားအထိ ကျောင်းတက်ဖိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးမှ ရုတ်တရက် ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား လေးတစ် ယောက်။ ဒီလိုအတိတ်ကလျှိဝှက်ချက် တွေအပြည့်နဲ့ ကျောင်းကအတန်းမှာသူငယ်ချင်းတစ် ယောက်မှမရှိဘဲ အဆင့် တွေက အမြဲအောက်ဆုံး ရောက် နေတတ်တဲ့ကျောင်းသား လေး Baek Seung Yoo
သူက တော့စကားသိပ်မ ပြောဘဲ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကိုပဲသ ဘောကျ နေတတ်တယ်။ ဒါ ပေမဲ့ဆရာမ Ji Yoon Soo ရဲ့အတန်းကိုတက်ပြီး ဆရာမကိုမှမြင်မြင်ချင်းရင်ခုန်ကာချစ်မိသွားတဲ့အခါ….
ရင်ခုန်သံချင်းထပ်တူကျတဲ့လူသားနှစ်ဦးဟာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာမှာနှစ် မြောမိကြတဲ့အခါ လှပတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း လေးတစ်ပုဒ်ထွက် ပေါ်လာပါ တော့တယ်။
ဝါရင့်သရုပ် ဆောင်မင်းသမီး Lim Soo Jung နဲ့တက်သစ်စမင်းသား ချော Lee Do Hyun တိုကြားက လိုက်ဖက်ညီမှုကိုလည်း ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ရင်ခုန်စရာ ကောင်း အောင် ကြည့်ရမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီကား လေးကို tvNရုပ်သံလိုင်းက နေဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပ တေး နေ့ တွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်လို ပရိတ်သတ်ကြီးကGCနဲ့အတူတူ စောင်ကိုက်ရင်း ရိုကြရ အောင် နော်။
Translated by Athena,Faith,Thae & Yin Cho
First air date Nov. 10, 2021